राष्ट्रवादको मूल्य र चुनाव- विचार - कान्तिपुर समाचार
राष्ट्रवादको मूल्य र चुनाव
भाद्र २०, २०७४ मेखराज परियार
काठमाडौँ — राष्ट्रवाद भनेको राष्ट्र या देशप्रतिको माया र सम्मान हो । राष्ट्रवादका निम्ति राष्ट्र चाहिन्छ र राष्ट्र या देशका निम्ति जनता र भूगोल अनिवार्य हुनैपर्छ ।
जनता भनेका नागरिक, अनागरिक, भिन्न जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्म, समुदाय इत्यादि हुन्। अनागरिकको अर्थ नागरिकता प्रमाणपत्र या राष्ट्रद्वारा जारी कुनै आधिकारिक परिचय पत्र प्राप्त गर्न नसकेका तर त्यही राष्ट्रको भूगोलभित्र पुस्तौं बसोबास गर्ने जनता भन्ने बुझ्नुपर्छ।
हाम्रो देशको राष्ट्रियता के हो? राष्ट्रवादी हुन के–के गर्नुपर्छ र के–केचाहिँ गर्नुहुन्न? असली राष्ट्रवादी शक्ति कुन हो? राष्ट्रियताको आधार के–के हुन्? गैर–राष्ट्रवादी (छन् भने) को हो? हामीले हाम्रो राष्ट्रवादको परिभाषा निर्धारण गर्नसकेका छौं? के छिमेकको बोली–व्यवहारबाट निर्धारण गरिने राष्ट्रवाद सही हो? हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेसँगै यस्ता सवालमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ।
प्रदेश नं. २ मा असोज २ गतेका निम्ति स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको छ र यो तेस्रो चरणको निर्वाचन हो। ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहमा दुई चरणमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन्। जहाँ नेकपा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो बन्नपुगे। निर्वाचन सम्पन्न भई परिणाम आए लगत्तैदेखि विभिन्न दलका चुनावी समीक्षा र आफ्नो दल कमजोर बन्नाका कारणहरू पत्ता लगाउने कार्यले आजपर्यन्त तरंगित छ, देश। अन्तरघातदेखि तालमेलमा घात गरेका, पार्टीका आन्तरिक गुट मौलाएको, टुटफुटका तितो अनुभव, पैसाको चलखेल आदि–इत्यादि। एमाले पहिलो पार्टी बन्नुमा उसले उठाएको राष्ट्रवादको मुद्दा निकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सन्दर्भमा दुईमत नहोला। त्यसो भए उसले उठाएको राष्ट्रवाद सम्बन्धी मुद्दा के हो? उसले उठाएको एक जात र क्षेत्रको स्वार्थपूर्ण राष्ट्रवाद के सही हो?
विचारको संघर्ष समाप्त भएको वर्तमान अवस्थामा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र समाजवादी आर्थिक नीतिको विकल्प छैन। कृषिमा आधुनिकीकरण, कृषिजन्य र साना उद्येगहरूको विस्तार स्वरोजगारमा प्रबद्र्धन, राष्ट्रिय उत्पादन र आत्मनिर्भरता, आन्तरिक एकता जरुरी छ। स्वाभिमानी, स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर, स्थिरता, स्थायित्व, शान्तिपूर्ण, आन्तरिक एकता मजबुत भएको राष्ट्रमात्रै राष्ट्रवादमा टिक्न सक्छ। आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक लगायतका समस्या आफै समाधान गर्नसक्ने क्षमतायोग्य राष्ट्र निर्माण गरेमात्रै राष्ट्रवादको नारा औचित्यपूर्ण हुनपुग्छ। मधेसीलाई भारत, विहारी, उत्तर प्रदेशका विदेशी देख्ने, दलित, उत्पीडित वर्गलाई होच्याउने, आरक्षण लगयतका हक–अधिकारको विरोध गर्ने एकांकी, एक जात क्षेत्र, वर्ग र समुदायको मात्रै पृष्ठपोषण गर्ने साम्प्रदायिक राजनीति गलत हो। यस्ता घृषित राजनीतिलाई राष्ट्रवादको नाम दिँदैमा हाम्रो राष्ट्रियता मजबुत हुने नभई झन् कमजोर बन्न पुग्छ। अतिवाद, घृणा, आक्रोश, सेन्टिमेन्टको बलमा कुनै दललेएक चुनाव त जित्ला, तर त्यस्तो व्यवहार र उद्देश्य दीर्घकालीन भविष्यका निम्ति घातक सिद्ध हुनेछ। यो राष्ट्र सबै जात,जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्म, संस्कृति, वर्ग र समुदायको समानसम्पत्ति हो। यी सबैको एकता र समृद्धिद्वारा मात्रै हाम्रो राष्ट्रवाद सफल हुनसक्छ।
विगतमा हाम्रो देशको शासक, राजा कुलको सत्ता स्वार्थबाट परिचालित थियो, हाम्रो परराष्ट्र नीति। राष्ट्रिय स्वार्थ र हितलाई समेत ती सामन्ती सत्ताको निरन्तरताका निम्ति कुण्ठित बनाइयो। तसर्थ हाम्रो राष्ट्रको आफ्नो मापदण्ड, मूल्य–मान्यता र राष्ट्रियताका क्षेत्र, सीमा विशेषतासमेत स्पष्ट पार्ने आवश्यकता ठानिएन। सधैं परनिर्भर अन्य मुलुकसँग आश्रित, दयाबाट मागेर विकास गर्ने सपना देख्ने मुलुकमा सीमित बनाइयो। आन्तरिक समानता, मतभेदको अन्त्य, साझा धारणाका निम्ति खास पहल हुनै सकेन। यस्तो गम्भीर विडम्बनाबाट गुज्रिएको राष्ट्रमा जनता भने राष्ट्रिय भावनाप्रति अत्यन्तै संवेदनशील देखिन्छन्। त्यसैको कारण जोकोही शक्तिले राष्ट्रवादको नारा उरालेर सत्ता स्वार्थ पूरा गर्दै आइरहेको यथार्थ हाम्रोसामु छ। यसले नत राष्ट्रिय हित सम्भव छ, न जनता बीचको आन्तरिक एकता नै।
पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक एकीकरण त गरे, तर भिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, वर्ग, समुदायको एकता दमन र छलपूर्वक हुन दिइएन। त्यस कालयता राष्ट्रका भिन्न भावनाको एकीकरण गर्ने उत्तम समय यही लोकतन्त्र प्राप्तिपछिको समय हो। त्यसबेला टुटेका मन, भावना अब जोड्नैपर्छ। एक धर्म, एक देश, संस्कृति, एक भाषा, नीति अबको आधुनिकनेपालमा टिक्दैन। सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, समुदायको पहिचानको संरक्षण, सम्मान र सम्बद्र्धनको खाँचो छ। यसले मात्रै राष्ट्रवादको जगेर्ना गर्छ। आन्तरिक एकता सम्मानद्वारा प्राप्त हुन्छ, नकि घृणा र विद्वेषद्वारा।
सबै जातजाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय, प्रवृत्ति समान हुन्। जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रिय एकता, शासन, संविधान राष्ट्रिय स्वाधीनताका स्रोत र मालिक हुन्। यस्तो भन्दै गर्दा जनता बीचको समानता, न्याय, सम्मान र एकता झनै महत्त्वपूर्ण सवाल हो। जनतालाई जोड्न सम्पन्न, सक्षम बनाउने कुरा राष्ट्रवाद हो। शिक्षित, सभ्य, मानवता, न्याय, विधि, विवेकी जनता भएमात्रै राष्ट्रवाद जीवित रहन सम्भव छ।
समग्रमा मधेस केन्द्रित दल या राजपा, संघीय फोरम, लोकतान्त्रिक फोरममात्रै मधेस होइन। आज पनि मधेसमा एमाले लगायतका राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक छन्। आस्था र विचारको राजनीति जहाँतहीं छ। स्वतन्त्र नागरिकदेखि आन्तरिक सामन्तवादको सिकार बन्न पुगेका भोका, नाङ्गा, गरिब, निमुखा जनता छन्। जमिनदारी, दहेज, महिला, दलित, पिछडा वर्गमाथि गरिने दमन, विभेद, अन्याय, अत्याचार छँदैछ। पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका तर नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका लाखौं जनता छन्, मधेसमा। त्यही कारणले वैदेशिक रोजागारीमा जानबाट समेत बञ्चित बन्नपुगेको विडम्बना छ। यसप्रति स्थानीय तहको मतपरिणाम बमोजिम देशकै ठूलो दल एमाले र यस दलका अध्यक्ष केपी ओलीले गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ।
द्वन्द्वरत मुलुक नेपालको शान्ति प्रक्रियामा समाहित गर्न र द्वन्द्वको अन्त्यका निम्ति प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी (हालको केन्द्र) हुन्। संक्रमणकालको अन्त्य, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका आधुनिक नेपाल निर्माणको मात्रा, जनउपलब्धि र जनाधारको प्रक्रियागत विकासमा यी दुई दलको ऐतिहासिक भूमिका छ। एमाले लगायतका दलको सहायक र सहयोगी भूमिका रहँदै आएको हो। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेको घटना बाहेक अन्य विशाल राष्ट्रवादी छवि एमालेसँग छैन। सबै क्षेत्र र पक्षको एकता र सम्मानबाट मात्रै हाम्रो देशको राष्ट्रवाद जीवन्त एवं चीरस्थायी बन्न सक्छ।
प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १६:३३
वैकल्पिक शक्ति निर्माणका आधार
असार २३, २०७४ मेखराज परियार
राजनीतिक दल भनेको विचार, सिद्धान्त र वादमात्रै होइन, आन्दोलनको निरन्तरता समेत हो । आन्दोलनको अर्थ सडक र सदनमा अवरोध गर्नु, सरकार या सत्ता विरोधी देखिनु, जनतालाई आक्रोशित बनाइराख्नु मात्रै हो भन्ने बुझाइ गलत छ ।
एउटा स्थापित र घोषित मान्यतालाई जीवन्त राख्न र आफ्नो दृष्टिकोण बमोजिमको प्रगतिशील एवं समृद्धि राष्ट्र निर्माणका निम्ति, राजनीतिक, भौतिक, सामाजिक, वैचारिक, आर्थिक या अन्य पनि संघर्षको चरमबद्ध संयोजन र परिचालनपछि मात्रै राजनीतिक दल निर्माण हुनपुग्छ । यस्तो प्रक्रियाविना क्षणिक आक्रोश, लोभ, स्वार्थ, सेन्टिमेन्ट, अल्पकालीन मुद्दा, जातीय, क्षेत्रीय, अतिवाद र त्यसलाई प्रयोग गरी स्थापित गरिने कुनै पनि राजनीतिक दल या शक्ति दीर्घकालीन नहुने दृष्टान्त हाम्रोसामु समेत स्पष्ट छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानता र समावेशीकरण, विधिको शासन, न्याय स्वतन्त्रता, जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अधिकारको प्रयोगबाट राष्ट्रको आमूल परिवर्तन सम्भव छ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र समाजवादी आर्थिक नीति नै अबको राष्ट्रिय गन्तव्य बन्न पुगेको छ । अहिलेकै जस्तो जातीय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक लगायतका विकृतिलाई यथावत राख्दै आर्थिक सम्पन्नतासँग मात्रै जोडेर खोजिने समृद्धि भ्रममात्र हो । न्यायपूर्ण समानतामूूलक, समाज र मान्यता सहितको आर्थिक समृद्धि अबको आवश्यकता हो ।
स्थानीय तह निर्वाचनबाट नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र नै बलियो र स्थायी शक्तिका रूपमा पुन: जनअनुमोदित हुनपुगे । जनताले धार्मिक, जातीय कट्टरता र महत्त्वाकांक्षी शक्तिलाई समाप्त गरिदिए । कोरा नारा, योजनाविहीनता, धर्म, जातजाति, क्षेत्रीयतालाई उराल्ने शक्ति किनारा लागे । प्रश्न उठ्छ, अबको राष्ट्रिय द्रुत विकास र समृद्धिको कार्यभार यही पुराना तीन शक्तिले पुरा गर्न सक्लान् ? वर्तमान नेतृत्व र शक्तिको पुन:संरचना गर्न जरुरी छ या राजनीतिक दलकै विकल्प खोज्नुपर्ने हो ? वैकल्पिक शक्ति यी तीन दलमध्ये नै हुन् या अन्यको उदय होला ?
प्रश्न गर्ने बेला आइसकेको छ र यो उपयुक्त समयसमेत हो ।
के कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र केही समयभित्र परिवर्तनशील शक्तिमा परिणत होलान् ? वर्तमान समयमा दलहरूले घोषणा गरेका उम्मेदवारी र विजयी उम्मेदवारलाई हेर्दा स्पष्ट रूपमा कित्ता देखापर्छ । कांग्रेस, एमालेले आर्थिक रूपमा सम्पन्न र कथित उच्च जातिकालाई उम्मेदवारमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । वास्तवमा यो नेपाली राजनीतिको विडम्बना र दु:खद परिस्थिति हो । लोकतन्त्रकै निम्ति लामो संघर्षद्वारा स्थापित राजनीतिक दलहरू उत्पीडित जाति, क्षेत्र, वर्ग, समुदायको मित्रशक्ति बन्न चाहेनन् । एमालेले केही र कतै–कतै दलित, महिला, उत्पीडित वर्गका प्रतिनिधिलाई समेत पनि स्थानीय तहमा उम्मेदार बनाएको देखियो । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानता र समावेशीकरण जस्ता मुद्दाबाट स्थापित माओवादी केन्द्रले भने भिन्न जाति, क्षेत्र, वर्ग र समुदायका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।
अबको केही दशक कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रकै सत्ता चल्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । शासन पद्धति, जनअधिकार स्थापनाका निम्ति निकै ठूलो योगदान दिएका यी प्रमुख ३ दल अझै उदार, प्रगतिशील बन्ने र युवा तथा सक्षम नेतृत्व स्थापित गर्नतिर लाग्ने हो भने यी दलको तत्कालै विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहन्न ।
रलोकतन्त्रमा भिन्न दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता र हक पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ । तथापि क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक उत्पीडनलाई उचालेर अतिवादी र साम्प्रदायिक राजनीति गर्ने क्रियाकलाप भने तत्काल बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ । पद, स्वार्थ, लोभ, नेतृत्वमा स्थापित हुने क्षणिक र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षामा समेत दल निर्माण गर्ने गलत परम्पराले फाइदा पुर्‍याउँदैन । सबै जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, धार्मिक क्षेत्रलाई समेटेर राष्ट्रिय कार्यभारको नेतृत्व स्थापित गर्ने ताकत बोकेको भरोसायोग्य शक्ति हाल देखिन्न । तर कुनै दल भविष्यमा आउन सक्ने सत्यलाई भने नकार्न सकिँदैन ।
अहिले पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक उत्पीडनमा परेका वर्गको असली प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिको अभाव छ । जातीय, क्षेत्रीय वर्गीय, भावना, घृणा, आक्रोशभन्दा माथि उठेर जनजीविका, जनताका व्यावहारिक समस्याको समाधानका निम्ति सक्षम राजनीतिक शक्ति र नेतृत्व स्थापित गर्न अत्यावश्यक छ । जनताको समस्या, भावना, एकता, सम्मान, न्याय, भ्रष्टाचार विरोधी, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्ने, समय सापेक्ष राजनीतिक दलको खाँचो छ । बेमौसमी विद्रोही र पश्चगामी शक्तिको भने पतन नै आवश्यक छ ।
प्रकाशित : असार २३, २०७४ ०८:३४